Indlu ezolileyo evalelweyo kufutshane neWinchester
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguChris
Indlu yipropathi yokulala eyi-2 ilungele ishishini kunye nokuzonwabisa. Ibekwe eOtterbourne, iikhilomitha ezi-5 ukusuka kwimbali yaseWinchester.
Ukunciphisa umngcipheko kwiindwendwe kunye nam, ndithatha i-Covid 19 nzulu kwaye ndithatha amanyathelo afanelekileyo. Qiniseka ukuba uyalifunda icandelo elikwi-Covid-19 kwicandelo 'leSithuba' njengoko oku kunokuchaphazela nakuphi na ukuhlala onokuthi ukwenze.
Indlu ikufuphi neWinchester kunye noMlambo i-Ichen yimizuzu emi-5 ngeenyawo zokuhamba ngokukhululeka. Ivenkile enkulu, kwi-150 m, ivulwa kwangethuba ukuya mva yonke imihla.
Ipropathi inendawo yeemoto zosapho ezimbini kwi-drive.
Izithako ezisisiseko zibonelelwa ukwenza iziselo ezishushu kunye nesidlo sakusasa. Ezi ziquka ikofu (ekhawulezileyo kunye neground), iti kunye netshokolethi eshushu, iisiriyeli, ubisi, iswekile, isonka, ibhotolo, iijam kunye nemarmalade kwakunye neziselo zeziqhamo.
Ikhitshi linefriji/ifriji,imicrowave,ioveni,hob kunye netoaster. Kwakhona ikhitshi linendawo yokomisa iwasha (umgubo wokuhlamba ukhoyo). Intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe ziindwendwe. Nceda uqaphele ukuba akukho matshini wokuhlamba izitya.
Indawo yokusebenza iyafumaneka ngeWiFi edityanisiweyo yomshicileli, imonitha yesikrini esicaba kunye nekhibhodi engenazingcingo kunye nemouse.
IiTV ziyafumaneka kwigumbi lokuhlala, igumbi lokulala eliphambili kunye nekhitshi. Zonke ziqhagamshelwe kwi-intanethi kwaye zifumana i-airview yasimahla kunye neenkonzo zokubamba.
Lo mhlaba uneCCTV ecupha ukhuseleko. Oku kuya kususwa ngesicelo.
Iiadaptha zombane zezixhobo zaseYurophu ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe.
Ukunciphisa umngcipheko wezempilo kwiindwendwe kunye nomninimzi ngexesha lo bhubhani wangoku, kufuneka uqaphele oku kulandelayo
a. Nceda uqinisekise ukuba itheko lakho leendwendwe, kunye naziphi na iindwendwe onazo, zenza 'iqamza lentlalontle' kunye nemigama yentlalo ngokweengcebiso zaseNgilani ezisebenzayo ngexesha lokuhlala kwakho.
b. Kwimeko apho naliphi na iqela lakho okanye iindwendwe zakho zibonise iimpawu okanye uvavanyo lwe-Covid-19, ngexesha okanye iintsuku ezili-14 emva kokuhlala kwakho, nceda uqiniseke ukuba undazise ukuze kuthathwe amanyathelo afanelekileyo ukukhusela umamkeli kunye neendwendwe ezilandelayo.
c. Ngaphandle kokuba kuvunyelwene ngenye indlela, kuya kubakho umsantsa wobusuku obuhlanu ubuncinci phakathi kokuhamba kweendwendwe zangaphambili kunye nokufika kwakho. Oku kuya kuvumela ukucocwa nokucoca ukuba kwenziwe ngokungqinelana nencwadana yemigaqo yokucoca ka-Airbnb (efumaneka kwiwebhusayithi ka-Airbnb) kunye nesikhokelo esinikelwe yiPublic Health yaseNgilani kwiisetingi ezingezizo ezononophelo lwempilo.
d. Zombini iibhedi eziphindwe kabini (ubukhulu bokumkani) kunye neebhedi zabantu abangatshatanga ziya kubonelelwa ngesikhuselo sematrasi kunye neshiti elisezantsi, iiduvethi kunye nemiqamelo. Ukuba unqwenela ungeza eyakho ibhedi (okanye inxalenye yayo (umzekelo, imiqamelo kunye needuvethi) Kungenjalo, kumaxabiso achaziweyo angezantsi, ndingakunika iduvet yobukhulu (£25), iduvet enye (£15) kunye nemiqamelo ( I-£12 ngepere nganye nceda ucebise ukuba zingaphi iperi ezifunekayo) Ezi zinto ziya kuba zintsha kraca kwaye zisekwi-package yazo. Intlawulo yazo iya kwenziwa kwangethuba lokuhlala kwakho kwaye ungahamba nazo xa uhamba. zishiye, ndiya kuzichitha.
e. Ukuba ubukhe wahlala kwipropathi ngaphambi kobhubhane, unokuqaphela ukuba uninzi lwemihombiso kunye nemihombiso 'engeyomfuneko' isusiwe kwaye uluhlu lwempahla lwasekhitshini luncitshisiwe ukuze kube lula ukucocwa ngokucokisekileyo.
f. Ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese ziya kucocwa ngokucokisekileyo kwaye zicocwe phakathi kweendawo zokuhlala, kubandakanya iikhabhathi, iidrowa kunye nezinto ezingaphakathi kuzo.
g. Kweminye imimandla yepropathi, emva kokucoca, zonke iindawo ezithe tyaba ezithe tyaba kunye nezinto ezibamba phezulu (amaqhina, izibambo, iiremote control, iiswitshi, iikeyboards, imouse njl.njl) ziya kucoca.
h. Izinto zokucoca ziyakushiyelwa ukuba uzisebenzise, kubandakanya nesicoci sesandla kunye nesitshizi sokutshabalalisa iintsholongwane. Nceda ufunde imiyalelo yabo ngaphambi kokuba uyisebenzise.
Kunye nevenkile enkulu yalapha ekhaya kukho ii-pubs ezimbini kumgama olula obethayo (ngaphantsi kweemitha ezingama-500), zombini zibonelela ngesidlo sasemini. Kwimigama emikhulu kukho inani leehostele zangokuhlwa ezibonelela ngokutya. IWinchester inoluhlu olubanzi lwamathuba okuhlaziya, kwaye ngexesha lokubhala inendawo yokupaka yasimahla kwiziko ledolophu ukusuka ngo-1800 ngokuhlwa nangeeCawe.
UMlambo i-Ichen ukufutshane kwaye unikezela ngeehambo ezinomdla ukuya emantla nasezantsi.
I-zoo yaseMarwell ikufuphi. Umda ongaphezulu lihlathi eNtsha kunye neSolent.
Andilindelanga ukuba sesiza ngaphandle kwaxa ubhukisha kwaye uhamba okanye xa uqhuba imisebenzi yesiqhelo yokulungisa efana nokucheba ingca njl.njl. Ndifumaneka emnxebeni ukuba kukho nabuphi na ubunzima obufunyanwayo.
Ngolunye uLwesihlanu omnye umntu uqhuba umsebenzi wokucoca nokucoca. Iinkcukacha zoku kuya kuvunyelwana ngazo xa kungena.
Andilindelanga ukuba sesiza ngaphandle kwaxa ubhukisha kwaye uhamba okanye xa uqhuba imisebenzi yesiqhelo yokulungisa efana nokucheba ingca njl.njl. Ndifumaneka emnxebeni ukuba kuk…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Otterbourne